Ukuyila 5 Izimvo Sep-28-2020
Bafundi abathandekayo, sithethe malunga necandelo loyilo lokulawula ukungunda kwangaphambi kokumila kwinqaku lokugqibela (Ungayilawula njani i-deformation yomoya kunye nenxalenye yetanki lamanzi? Icandelo loyilo), kodwa ukuba noyilo olulungileyo sisiseko, nathi kufuneka sikwenze Umsebenzi omninzi wokulungisa uhlengahlengiso ngokwesiphumo sesilingo sokuvavanywa. Njengoko usazi, icandelo elahlukileyo linayo ijiyometri eyahlukeneyo, kungoko imeko eyahlukileyo yokubumba kufuneka ifane nezisombululo ezahlukeneyo. kulungile, nceda undilandele ukuze wazi esiphi isisombululo esiza kusenza.
Ukuthetha ngokubanzi, ngesiqhelo sidinga amaxesha angama-4 okulinga ukwenza ukungunda kulungele ukuthengwa, kwaye lonke uvavanyo lunendima yalo yokufaka igalelo ekugqibeni.
Uvavanyo lwe-T0 liqela lethu langaphakathi elitshatileyo ukujonga umsebenzi wokubumba, kwaye ungqinisise isiphumo se-pre-deformation esiyileleyo okanye esenziwe kwisikhunta sichanekile okanye hayi.
Ukufumana idatha yenxalenye yesiphene (Isiphelo somphezulu, ityhubhu ye-tube, imingxunya efanelekileyo, indibano ebunjiweyo…)
Zama ukufumana yonke imiba yokubumba, nokuba kucacile okanye ifihliwe, umzekelo: ukuvulwa / ukuvalwa kwentshukumo, isenzo sokukhutshwa kwesikhunta, inqanaba lokugcwalisa izinto, inxenye yoku-ukubumba imeko, ukukhanya kunye nokukhwaza kancinci njl.
Ukuhlala iisampulu kubushushu obuqhelekileyo be-24h nenqanaba lasimahla, emva koko ulinganise ubukhulu bazo (iingxelo zobukhulu kuphela kuguqulo lwangaphakathi), ngakumbi ukujonga indawo yonyawo, njengokuthe tye, ukuphakama, ukuphakama kweenyawo kunye nobukhulu. Kungenxa yokuba indawo yeenyawo ihlala ingumlinganiso wedatha. Nje ukuba ingxelo ye-T0 ifumaneke, emva koko uguqule ukungunda ngokungqinelana nokuwelda.
Malunga nokuguqulwa kobukhulu emva kwe-T0, jonga kuphela malunga nokuthe tyaba, ngokuthe tye kunye nokujonga ngokungafaniyo.
Ukuzama i-T1, umthengi ngesiqhelo uya kujoyina kuthi xa silinga ukungunda kwaye kufuneka siqonde apha ngezantsi kwiinjongo ezivela kwi-T1.
Umsebenzi womngundo kunye nokuhamba kufanelekile, kwaye inaliti kufuneka iqhutywa inesimo esizinzileyo.
Ubungakanani beesampulu kufuneka zibe zilungile kwindawo yeenyawo ethe nkqo, tyaba kunye nokujonga ngokungafaniyo.
Kwiiyure ezingama-24 kamva, ukulinganisa iisampulu (iingxelo zobukhulu obupheleleyo ziya kuthunyelwa kubathengi) kwaye ngokweziphumo zokwenza ukuguqulwa komngundo.
Ukutshintsha isinyithi esithambileyo sokufaka okungundoqo kwisinyithi esifunekayo. Okwangoku jonga isixhobo kunye nenxalenye yemigangatho ukulungiselela uluhlu lokutshekisha.
Ukwenza uhlengahlengiso oluncinci malunga nokuthe tye, tyaba kunye nokujonga ngokungafaniyo.
Ukuphucula konke ukunyamezelana kwesikhundla.
Iinjongo zokuzama kwe-T2 zezi:
Ubungakanani bendawo engama-95% yemibhobho, iibrkts kunye nevidiyo ekunyamezelweni. Ukulinganisa iisampulu kwaye ujonge ukuba ngaba ubungakanani be-NG buhlala na.
I-100% ethe tye, tyaba kunye nokuthe ngqo kukunyamezelana.
Konke ukungangqinelani phakathi kokufakwa kungaphakathi kwe-0.1mm.
Iisampulu ze-T2 kufuneka zingeniswe kubathengi ukulungiselela umsebenzi kunye novavanyo lwendibano, unxibelelwano kunye nomthengi ukuba kukho nayiphi na ingxelo evela kuvavanyo. Ukuba ngaphandle kokutshintsha kobunjineli siya kuguqula ukungunda njengeshedyuli.
Ukuphucula yonke imilinganiselo.
Ukuzama i-T3 ukungunda kufuneka kugqitywe ngokupheleleyo ubungakanani kunye nemiba yesampulu.
Ukuvunywa kwesixhobo (TA okanye i-T4) kufuneka kuqhutywa ngokuqhubekayo iiyure ezi-2-4 ukuqinisekisa ukusebenza komngundo kunye nomgangatho wesampulu. Emva kokuzama ukugqiba ukujonga ukungunda ngaphambi kokuthunyelwa.
Ngasentla sisishwankathelo senkqubo yokuguqulwa kwesikhunta kwangaphambili. ulwazi oluneenkcukacha nceda unxibelelane nathi ngu harry@enuomold.com
Enkosi ngexesha lakho!